Taageeridda shabakad biyo-fara badan si loo ilaaliyo naangeyaga
Shabakada webiga waxay awood u yeeshaan una midoobaan dadka iyo beelaha si ay u ilaaliyaan una soo celiyaan wabiyada iyo maydadka kale ee biyaha. Waxay ka shaqeeyaan inay ku xiraan kooxda hareeraha webiyada iyo biyaha ee dalka oo dhan, iyaga oo awood u siinaya in ay sameeyaan farqi iyo sii ballaarinta saameynta. Waxay bixiyaan shakhsiyaadka iyo ururrada la-talin, la-talin, iyo tababbarro si loo xoojiyo dedaatada ilaalinta biyaha.
Aqoonta nidaamka River Network iyo waayo-aragnimada fududeynta waxay u suura galinaysaa inay la shaqeeyaan xubno ka mid ah [Mississippi River] Wadashaqeyn si loo abuuro ajandooyin wax ku ool ah, waxqabadyo hawleed oo hagaya, iyo horumarka
River Network ayaa fududaysay kulammadii Mississippi River Collaborative ee muddo tobaneeyo sano ah, iyada oo gacan ka geysanaysa doodaha siyaasadeed ee nadiifinta biyaha ee ka jira mid kasta oo ka mid ah barnaamijka 10 ee Mississippi River basaasku waxay tilmaamayaan oo ay hirgelinayaan aragtidooda lagu yareynayo wasakheynta iyo dib u soo celinta qoyaanka qotodheer ee wabiga. Wareegga Shabakada Nidaamka Nidaamka Nidaamka iyo aqoonta fududeynta waxay u suurtagelinaysaa inay la shaqeeyaan xubno ka mid ah Wadashaqeyn si loo abuuro ajandooyin wax ku ool ah, waxqabadyo aqoon-is-waydaarsiyo hagitaan ah, iyo horumar wax ku ool ah, taas oo dhalisay kulanno wax ku ool ah iyo natiijooyin wax ku ool ah oo loogu talagalay xubnaha Wadajirta.
Sida jeegga iyo isu-dheelitirnaanta Ciidul Fidiyaha 'oggolaanshaha geeddi-socodka u oggolaanaya in la dejiyo oo la buuxiyo goobaha qoyaanka iyo durdurrada, River Network waxay soo saareen falanqeyn ku salaysan baaritaan kasta oo dib-u-eegis dawladeed ee ruqsadaha qaranka. Marka dib loo eego dib u eegista, River Network waxay bixisay talooyin siyaasadeed si ay uga caawiso xubnaha udubdhexaadka ah ee xaddidaad heer gobol ah oo xoog leh oo si qoto dheer uga shaqeynayey afarta gobol ee ku jira basaas si loo xaqiijiyo shuruudo caafimaad iyo miisaaman xisaabeed ayaa waxaa soo buuxiyay Ciidanka Ciidanka kahor intaanu oggolaan waa la siiyaa. Alliance Waterway Alliance waxay isticmaashay falanqaynta River Network Network iyo talooyin si ay ugu dhiirigeliyaan Qaybaha Biyaha inay ku soo rogaan shuruudaha Ciidamada Corps oo u ogolaanaya ogolaansho.